HERO OF MYANMAR: ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့လေးစားရမှာလဲ?
[15:21 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့လေးစားရမှာလဲ?အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးနဲ့ တော့ ဟိုယောင်ယောက်ဒီယောင်ယောင် အမောင်မြောက်မှန်းမသိတော့ဖြစ်နေပါပြီ။တခါတလေမှာကိုယ်ပိုင်စကားတွေထက် ပြည်သူပြောတာတွေ
ပြည်သူတွေကို ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ တာ ထောက်ခံလိုက်ဦးမယ်
၊ဘေးက ပြောတာတွေကိုသူ့ စကားလိုလိုပြောပြီး လူတွင်ကျယ်ကြီးလုပ်နေတာကတော့လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အမည်နာမနဲ့ တော့နည်းနည်းလွဲချော်နေသလားလို့ ဗျာ။ဒါတောင် ဖေဖေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်ဆိုတာ ပါသေးတယ်မဟုတ်လား။
ဒေါ်လာစားတွေကလည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလွတ်ခင်က တမျိုး၊ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ စာရွက်ကလေးတွေ ကိုင်ပြီးပြစားနေရတဲ့ဘ၀ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းလွတ်ရော ပြောစရာ အပေါက်က ရှာမရချိန် ဧရာဝတီက ထောက်ပြစရာဖြစ်လာပြန်ပါပြီ။ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ဒါလေး လုပ်သင့် တယ်တော့ထောက်ပြပြောဆိုခြင်းမရှိပဲနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တနေ့ တက်လာတာနဲ့တခါပြောလိုက်ရမှ ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချက်ချင်း ကန့် ကွက်လိုက်ရမှ ထမင်းတလုပ်စားရမှာ လားလို့ မေးစရာတော့ဖြစ်လာပါပြီ။
အရင်က လူမှု့ ရေးကွန်ယက်သုံးမယ်လို့လေသံပစ်ယုံနဲ့ နည်းနည်းလေး ဟော့ ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်
ယောက် ခုတော့လွပ်ရက်ပေါင်း (၁)နှစ်နီးပါးကို ရောက်ရှိလာချိန်မှာ တော့အပြောနဲ့ အလုပ် အဟုတ်မညီခဲ့ တာကိုတော့မျက်မြင်ဝါးဝါး တွေ့ နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို ဒီမိုက၇က်တစ်ပါတီ ၀င်တဦးက
ကျနော်တို့ ကတော့မျော်လင့် တာပါ။ဘာလိုလဲ ဆိုတော့NLD အဖွဲ့ အစည်းဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်လို့ 
တောင်ပြောလို့ ရတယ်မဟုတ်လား။သူရဲ့စစ်တပ်ဆန်ဆန် တသွေးတသံ အမိန့် ထဲ မှာ ဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင် လိုက်နာရတာပဲလေ။ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ေ၇ွးကောက်ပွဲကို ပဲကြည့် ပါ။သူပြောတဲ့ အတိုင်း NLD ကေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်မပြိုင်ခဲ့ ဘူးလေ။ခုကျတော့ လည်း ရပ်တည်ခွင့် အတွက်တောင် အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံရဲ့ ဥပဒေတွေကို ကိုးကားနေမှတော့သူပြောတဲ့မထောက်ခံပါဖွဲ့ စည်းပုံက လုပ်ပွဲပါလို့ ပြောထားသမျှက သဲထဲ ရေသွန်သလို ဖြစ်မနေဘူးလား။ပြောတော့ပြည်သူချစ်တယ်ပြောပြီးလုပ်နေတာကတော့ချိုမိုင်မိုင်ဖြစ်နေတယ်။ခုလည်း ဖြစ်ပြန်ပြီ။သူကို ကြည့် ပြီး ပြည်တွင်းဖြစ်ဖြစ် ၊ပြည်ပ ဖြစ်ဖြစ် အတိုက်အခံအ
များစုက လုပ်နေကျတာလေ။လွပ်ပြီးပြောတော့လူမှု့ ကွန်ယက်သုံးမယ်ပေါ့။ခုတော့မအားလို့ မသုံးနိုင်ပါဘူး ဖွင့် ချလိုက်တော့မကြာခင်ကပဲ ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့် တာက ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဟိုး နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က
BBC က ဦးအောင်မြင့် ထွန်း က ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သတ်လို့မေးခွန်းကို ကျမဘောလုံးအကြောင်းနားမလည်ဘူးလို့ ဖြေပြီးခါမှ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်မှ ဦးဇော်ဇော်ဆီ က ဘောလုံးလက်ချာလာ၇ိုက်တာကကျတော့ ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာ
လို့ ပြောသွားတာကို ကြည့် ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေက အပြောနဲ့အလုပ် သက်သေမပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်
လွပ်ခါစက ဒုတိယပင်လုံဆိုပြီး ဟစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ခုချိန်ကျတော့ လည်း ဒုံးရင်းပါပဲ။အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးကျပါ ပြောပြီး နှစ်ရက်မကြာဘူး၊KIO က အပစ်မဲ့လုပ်သားတွေကို သတ်ပြလိုက်တယ်။ရင်ကြားစေ့ ကျ ပါြေ ပာပြီး မောင်နှစ်မ
ချင်း တရားရုံးေ၇ာက်နေတယ်။ေ၇ွးကောက်ပွဲ မပြိုင်နဲ့ ပြောပြီး ခုကျရပ်တည် ခွင့် ရအောင်မနည်းရုန်းကန်နေရတယ်။ပြည်သူတွေကို ချစ်တယ် ပြောပြီး မြန်မာလုပ်သားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်အောင် စီးပွာရေးပိတ်ဆို့ မှု့ က အချိန်မတန်သေးပါဘူးဆိုပြီး ကန့် ကွတ်တယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ တင် ဘယ်လိုစိတ်တွေနဲ့လေးစားရမှာလဲ? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ် ဆိုတာလေးပဲပြောလိုက်ချင်တယ်ဗျာ